Safiirka MAREYKANKA oo shaaciyay arrin ka go'an Xasan Sheekh (Dhageyso) - Caasimada Online
Home Warar Safiirka MAREYKANKA oo shaaciyay arrin ka go’an Xasan Sheekh (Dhageyso)
Safiirka MAREYKANKA oo shaaciyay arrin ka go’an Xasan Sheekh (Dhageyso)
Muqdisho (Caasimada Online) – Safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre oo wareysi gaar ah siiyay VOA ayaa sheegay inay madaxweynaha cusub ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ay ka go’an tahay in uu mustaqbal wanaagsan u horseedo Soomaaliya.
Larry Andre oo dhowr jeer la kulmay madaxweyne Xasan ayaa waxa kale oo uu ku tilmaamay in uu yahay hogaamiye Qaran oo leh aragti, islamarkaana yaqaan sida wax loo hogaamiyo.
Sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweyne Xasan ay qorshaha ugu jirto in xiriir wanaagsan oo guuleysta uu la yeesho dowlad goboleedyada, si ay horumar uga sameeyan dhinacyada Amniga, Dhaqaalaha, Wax ka qabashada Abaaraha iyo socod-siinta howlihii ay ka tagtay dowladdii hore.
“Waxa uu ku jiraa marxaladii dowlad dhisida isaga oo ka fikiraya dadkii kusoo biiri lahaa si nolol fiican ugu abuuri lahaayeen dhamaan Soomaalida, waa la dhacay in uu yahay hogaamiye Qaran oo leh khibrad iyo aragti oo ku dhiiran in uu mustaqbal wanaagsan gaarsiiyo Soomaalida.”
Waxa kale oo uu sheegay in mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee madaxweynuhu uu mudnaanta siinayo ay tahay wax ka qabashada dhibaatada bani’aadaminnimo ee ka dhalatay abaaraha.
Larry ayaa ugu dambeyntiina hoosta ka xariiqay in Mareykanka uu taageeradiisa la garab taagan yahay dowladda Xasan Sheekh, islamarkaana ay si dhow ula socon doonaan dhismaha dowladnimada.